Podcast 8x19: iOS 10.3 Vaovao | Vaovao IPhone
8 × 19 Podcast: Vaovao iOS 10.3
Ny Beta voalohany an'ny iOS 10.3 dia mitondra fanovana mahaliana, toy ny safidy vaovao hahitana ny AirPod very anao, menus fanovana vaovao ary fanovana ny hevitry ny App Store. Ny macOS koa dia misy fiovana vitsivitsy amin'ny Beta voalohany toa ny Night Shift, safidy iray mahatonga ny masonao hiala sasatra bebe kokoa rehefa mampiasa solosaina amin'ny alina. Izahay dia mamakafaka ireo vaovao rehetra ireo ary koa ireo vaovao ara-teknolojia amin'ny herinandro amin'ity fizarana vaovao amin'ny podcast isan-kerinandro ity. Halahelo azy ve ianao?
Raha efa nanomboka tamin'ny vanim-potoana lasa isika, amin'ity taona ity ny Podcast iPhone Actualidad dia azo arahana mivantana amin'ny alàlan'ny fantsona YouTube antsika ary handray anjara amin'izany amin'ny alàlan'ny firesahana amin'ny ekipa Podcast sy ireo mpijery hafa. Misoratra anarana amin'ny fantsona anay handraisana fampandrenesana hoe manomboka ny firaketana mivantana ny podcast, ary koa rehefa mampiditra horonantsary hafa avoakanay ao izy. Mazava ho azy fa hitoetra ao amin'ny iTunes ihany koa izy io mba hahafahanao mihaino azy isaky ny te hampiasa ny fampiharana Podcast tianao indrindra ianao. Manoro hevitra anao izahay misoratra anarana amin'ny iTunes ka ny fizarana dia alaina ho azy raha vantany vao misy. Te handre azy eto ve ianao? Etsy ambany fotsiny dia manana ny mpilalao hanao azy ianao. Izahay koa manana Playlist amin'ny Apple Music miaraka amin'ny mozika mitendry amin'ny podcast.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » 8 × 19 Podcast: Vaovao iOS 10.3
Gamevice, gamepad vaovao voamarina MFi